Calaamade aan la tirtiri karin, khad aan la tirtiri karin, Daabacaha Koodhka - AoBoZi
Shirkaddayadu waa shirkad tiknoolajiyad sare ku takhasustay R&D, wax soo saar, iibin iyo adeegsi isula jaan qaadi kara daabacadaha.
Sida soo saaraha shahaado ISO9001 iyo ISO14001, xasilloonida khadkeennu waa kan ugu fiican Shiinaha, oo ay aqoonsan yihiin macaamiisha iyo tartamayaasha Shiinaha.
Si loo hubiyo tayada iyo adeegga wanaagsan, waxaan diiradda saareynay habka wax soo saarka. Waxaan ku helnay amaan weyn lamaanahaaga.
Waxaan leenahay warshad noo gaar ah sidoo kale waxaan leenahay warshado badan oo la isku halleyn karo oo si wanaagsan loola shaqeeyay berrinka. U hogaansanaanta "tayada marka hore, marka hore macaamilka.
2580 2586K 2588 2589 2590 HP dareeraha khad Cartri ...
Pretreatment Liquid Sublimation Heat Wareejinta C ...
30ml Dhalo Dhalo Qoraal Fudud Qalin ...
TIJ2.5 Systems Ink Bulk CISS Haanta la 1/2/4/6 ...
Lix qaybood oo waaweyn
In ka badan 15 sano oo khibrad ah
Fujian AoBoZi Technology Co., Ltd. waxaa laga aasaasay 2005 magaalada Fujian, Shiinaha, Shirkadeenu waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo ku takhasustay R&D, wax soo saar, iibin iyo adeegsiga macaamiisha daabacaadda iswaafajinta Waxaan nahay soo saaraha ugu horreeya iyo hoggaamiye khabiir duurka ku ah Epson, Canon, HP, Roland, Mimaki, Mutoh, Ricoh, Walaal, iyo nooc kale oo caan ah oo ku takhasusay noocyo kala duwan.
Dhammaan alaabooyinka aan iibinno waa la caddeeyay
Mugga iibka ayaa la dhigayaa
Fadlan hadda nala soo xiriir
Adeegga u jahaysan Macaamiisha
Fujian AoBoZi Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2007. Shirkadeenu waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo ku takhasusay R&D, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga qalabka wax daabaca ee la jaan qaadi kara.
Kooxdayadu waxay u heellan yihiin hal-abuurnimo, iyo iftiin iyo is-dhexgal leh tababar joogto ah iyo xigmad aad u sarreysa iyo falsafad, waxaan u adeegnaa baahida suuqa ee alaabada dhammaadka-sare, si loo sameeyo alaab xirfad leh.
Sannado badan, waxaan u hoggaansannay mabda'a macaamiisha u janjeedha, tayada ku saleysan, ku-daba-galka heer sare, wadaagga waxtarka labada dhinac.